အလုပ်လုပ်ရတာပျော်မွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? | Mycanvas
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေဟာခက်ခဲပေမယ့်လည်း အချို့အကြံဉာဏ်အသေးလေးတွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ဆောင်ရင် အလုပ်မှာပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်အသေးစိတ်ကို သိစေဖို့ ပုံတစ်ပုံချင်းစီက ဖော်ပြချက်တွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်…
Tip 1 – မိမိကိုယ်ကိုယ်အတွက်မဟုတ်ဘဲအခြားသူများအတွက်အလုပ်လုပ်ပါ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုအတွက်ပဲတစ်ခုခုလုပ်ခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ လုပ်ချင်စိတ်ကို ကန့်သတ်ထားစေတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ်သုံးတာ၊ ကိုယ့်အချိန်ကိုယ်သုံးတာတွေထက်စာရင် မိသားစုအတွက်၊ ကလေးတွေအတွက် နဲ့ တခြားသူတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ် ဒါမှမဟုတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချပြီး အဆင်ပြေအောင်ကူညီဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးက ပိုပြီး ပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။
Tip2– နောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိမျှော်လင့်ထားပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချိန်ဇယားဆွဲလေ့ရှိပေမယ့် နေ့လည်စာစားချိန်နဲ့ အသွားအပြန်အချိန်တွေအတွက်ကျတော့ရော ဘယ်လိုစီမံလဲ? သင်အစာစားချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေ့နေ့လည်စာအတွက် ဘာစားချင်လဲဆိုတာကို သင်ကြိုပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျန်းမာရေးအတွက် သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ညနေပိုင်းမှာသင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မလဲဆိုတာမျိုး မနက်ထဲက ကြိုပြီးစဉ်းစားထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအလုပ်နားချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်မယ်၊ အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးကြိုပြီးစဉ်းစားထားခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်က တစ်နေ့တာကို ပိုမိုသွက်သွက်လက်လက်နဲ့ဖြတ်သန်းစေနိုင်ပါတယ်။
Tip3– Comfort Zone ကိုချဲ့ထွင်ပါ
Comfort zone ဆိုတာက လူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီး ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကတိုးချဲ့နိုင်တဲ့ သက်သောင့်သက်သာနေနိုင်မယ့် Range တစ်ခုကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင်တော့ Public မှာ စကားပြောဆိုဆက်ဆံရခြင်းက တခြားသူတွေအတွက်သက်သောင့်သက်သာမရှိပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် သက်သောင့်သက်သာရှိတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော Comfort Zone ရှိသူများဟာ အလုပ်မှာပျော်မွေ့ကြပြီး ပိုမိုပျော်ရွှင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Comfort zone ကိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက် လူတို့သည်အသစ်သောအရာတို့ကိုကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မသက်မသာဖြစ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရလေ့ရှိတဲ့အတွက် စပြီး Comfort zone ကို တိုးချဲ့ဖို့အတွက် တွန့်ဆုတ်ကြ‌သော်လည်း ၎င်းတို့ကို ကျော်လွှားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့အတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ပြီး Comfort Zone ကိုတိုးချဲ့ထားတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။